Banyere anyị - Jiangsu Excalibur Power Machinery Co., Ltd.
Quality Control Ma nkwa
Igwe na -enye ọkụ
Mepee Frame Dizel Generator
Silent dizel Generator
Mmanụ ụgbọala Water mgbapụta
Kerosin Water mgbapụta
Mmanụ Mgbapụta Mmiri Dizel
High Pressure mgbapụta
N'elu Ịrụcha Screed
Ike Tiller & Cultivator
Akụ mapụtara & Ngwa
Engines mapụtara Parts
Generator mapụtara Parts
Mmiri mgbapụta mapụtara Parts
Ìhè Construction Machinery mapụtara Parts
Akwụkwọ & UGO
Afọ AHA AHTA
2018 Advanced Enterprise nke Teknụzụ Innovation Xinghua Municipal Kọmitii Obodo Development Economic Development
2017 Ulo oru di elu Ngalaba Sayensị na Nkà na Jgbè Jiangsu
Ngalaba ego nke iangbè Jiangsu
2016 Technologylọ ọrụ Teknụzụ nke Onwe Jiangsu Private Technology Enterprise Association
AH CR MAN AKW ENKWỌ ND EN ỌZỌ
2016 AKW SYKWỌ AKWKWỌ AKWUKWỌ AKW QKWỌ AH QR C IAF, CNAS
2015 Akwụkwọ nke nkwekọrịta SGS
2014 Nyocha nke nkwado- OA ENTE CERTIFICAZIONE igwe LTD.
2020 Ogwe na-akwado njikọ njikọ nke generator diesel Office nke arịa ọgụgụ isi nke China
2019 Dizel generator mfe na-ezukọta na-ebu mmanụ na-ebu mmanụ Office nke arịa ọgụgụ isi nke China
2018 Chịkọta ndị na-eme ngwa ngwa maka mmanụ diesel Office nke arịa ọgụgụ isi nke China
2017 Anụ lubrication oche maka diesel generator Office nke arịa ọgụgụ isi nke China
2016 Radiator n'usoro ngwaọrụ maka dizel generator Office nke arịa ọgụgụ isi nke China
Onyinye sitere na ALIBABA
2013 Tinggbụ-Edge Awad maka E-azụmahịa Global Trade Alibaba.com
NKWUP MANTARA NKWETA
The uru nke laser ọnwụ igwe bụ mgbanwe, nkenke, repeatability, ọsọ, na-eri-irè, oké mma na contactless ọnwụ.
Excalibur etinyela ụdị abụọ nke igwe ịcha laser iji hụ na ngwaahịa Excalibur ziri ezi na arụpụtaghị ihe. Site n'enyemaka nke laser ịcha igwe, Excalibur nwekwara ike mezuo ahịa OEM chọrọ maka agbakwunye logos na ngwaahịa anyị.
Mgbanwe Site "Emepụtara Site Excalibur" Iji "Emepụtara Na ọgụgụ isi
Excalibur akpọwo abụọ Automatic esi Chain Assembly Lines, nke nwere ikike nke n'ichepụta 1250 setị nke engines ọ bụla akara kwa ụbọchị. A ga-ejikwa ụfọdụ ígwè ọrụ rụọ ọrụ ụfọdụ ebe dị mkpa, nke nwere ike belata mmejọ ndị ọrụ na-akpata. Site na usoro ERP, anyị nwere ike ijikwa ma nyochaa ogbako ahụ, nrụpụta, ndị ọrụ, ogo, akụrụngwa na gburugburu iji chụpụ mmepụta Excalibur, arụmọrụ n'ihu.
Robot ịgbado ọkụ Machine
Onye na-arụ ọrụ na robot welder nwere ike nweta ogo dị elu site na ijide ọsọ ịgbado ọkụ ziri ezi, nkuku na anya na izi ezi nke (+ 0.04mm). Gbaa mbọ hụ na nke ọ bụla na-ịgbado ọkụ nkwonkwo na-mgbe niile na-emepụta na kasị elu budata belata mkpa maka oké ọnụ rework.
Site n'enyemaka nke Robot Welding Machines, Excalibur nwere nnukwu mmụba na arụpụta ọrụ, yabụ, na-eme ka nnyefe oge. Ọ bụghị naanị na Excalibur nwere ike ijide n'aka oge nnyefe, mana ọ ga-ekwenyekwa maka ngwaahịa a.
Akara NA AKW GUKWỌ
Excalibur ka a na-agbalịsi ike dị ka slogan "Eziokwu, Nke Kachasị Anya" maka ndị ahịa ọ bụla
Ngwa, dị ka ekweghị ekwe testers, micrometers, callipers, na jumping ngwá nwalee na gburugburu na ike ike.
Excalibur chọrọ ka akụkụ nyocha niile ga-enyocha tupu ịbanye n'ụlọ nkwakọba ihe. Anyị nwere ndị nyocha maka akụkụ akụkụ ụwa niile, yana ndị nyocha maka akụkụ ahụ pụrụ iche.
Nnwale Ogo Mgbakọ
Excalibur chọrọ nnwale nyocha maka ngwaahịa ọ bụla, iji lelee ma enwere nsogbu ọ bụla na nzukọ ahụ. Anyị na-enyocha ọsọ, ọnọdụ okpomọkụ, na mkpọtụ. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, anyị ga-eziga mbukota.
Excalibur engineer na-elekọta nke nzukọ mma . Ha ga-edebe ndekọ nke usoro ahụ ma rụpụta.
Dịka ụlọ ọrụ, anyị ga-eji teknụzụ niile maka ngwaahịa anyị niile kwado gị.
Ọ bụrụ na ọ bụla akwụkwọ ikike ikpe emee, anyị ga-alaghachikwute gị na anyị na ngwọta n'ime 24 awa.
Maka oke nsogbu, ọ bụ ezie na enwere ike pere mpe, anyị ga-eziga ndị ọrụ aka anyị na mba ọzọ iji nyere aka dozie nsogbu ahụ.
Niile akụkụ ahụ mapụtara, n'ime oge ikike anyị, bụ n'efu.
Ọ bụrụ na karịa oge ikike, anyị nwekwara ike ịnye akụkụ ahụ maka ngwaahịa anyị niile.
Site na ịge gị ntị na ịnwe oge niile na mpaghara ọ bụla na ọrụ gị, ndị ahịa anyị na ndị ọrụ aka ọrụ gị na-adụ gị ọdụ ma gbakwunye ezigbo uru bara uru.
Angzọ Chuanghui, Lincheng Technology Industrial Area, Xinghua Ctiy, Jiangsu Province, PRChina
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa- Mkpado na-ekpo ọkụ- Sitemap.xml